Talo-gelinta Webka oo laga bilaabo Sempt
Sawir gacmeedku ku habboon yahay shabakadaha internetka e-commerce iyo xayeysiinta macluumaad ka BestBuy, Walmart, eBay, Target iyo Amazon sida websiteyada. Qalabkani wuxuu na siiyaa macluumaad sax ah oo ku saabsan alaab ka mid ah alaabtiisa, sharaxaadda, sawirka, iyo qiimaha. Waxaa intaa dheer, badeecada waxsoosaarka ayaa leh sahal udub-dhex-dhexaadka API ah waxaana lagu dhejin karaa shabakad kasta oo shabakadeed si habboon.
Haddii aad dhawaan sameysatay shabakadda e-commerce, waxaad u baahan kartaa inaad ururiso macluumaadka ku saabsan tartamayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha, alaabta, qiimaha, iyo sawirada. Waxaad si sahlan u barbar dhigi kartaa goobaha e-macaamiisha ee kala duwan sida Amazon, Walmart, iyo eBay iyo inaad hesho macluumaad faa'iido leh adoo isticmaalaya Mashiinka Mashiinka. Qalabkani waa mid gaar ah sababtoo ah waxay ka caawineysaa in ay isbarbardhigaan goobaha e-macaamiisha ee kala duwan, inay helaan liisaska wax soo saarka, sawirrada, dib u eegista, iyo macluumaadka qiimaha. Si ka duwan sida qalabka kale ee caadiga ah, bacaha wax soo saarka wuxuu helayaa xogta adoo isku dayaya iyo isbarbardhigaya boggaga internetka ee kala duwan oo aad ku hesho faahfaahin ku saabsan iibiyeyaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha. Sidaa daraadeed, waxaan dhihi karnaa Product Scraper waa laf-dhabarka internetka e-commerce.
Isticmaal badeecada wax soo saarka si loo kormeero qiimaha iyo adeegga tartanka tartanka:
Ku iibinta alaabooyin kala duwan oo internetka ah ee qiimaha tartanka had iyo jeer waa mid caqabad ku ah dhammaanteen. Mararka qaar dadka isticmaala waxay ku wareersan yihiin sicirrada isbeddelka alaabta kala duwan ee internetka. Amazon iyo eBay waxay isku dayaan in ay qiimaha ku hayaan heer wanaagsan waxayna ujeedadoodu tahay inay soo jiidato macaamiil badan oo badan. Wixii bilow ah, helitaanka macluumaadka alaabta waa mid aad muhiim u ah. Iyadoo la adeegsanayo Gaadiidka, waxay kuu sahlanaan doontaa inaad isbarbardhigto sicirka alaabooyinka kala duwan oo aad ugu fiicnaan lahayd boggagaaga si habboon. Tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad ka soo qaadato xogta dekadaha safarka ama shirkadaha e-ganacsiga, waa inaad isku daydaa inaad si dhaqso ah u xoqdo. Qalabkani wuxuu ururin doonaa, qabanqaabin doonaa oo ku heyn doonaa macluumaadka wakhtiga dhabta ah.
Isticmaal alaabta wax lagu duubo si loo qiimeeyo isbeddellada suuqa:
Goobaha e-commerce iyo ganacsiyada internetka si joogto ah ula socdaan. Tusaale ahaan, Amazon waxay isha ku hayaan isbedelada suuqyada ee soo socda waxayna ururiyaan macluumaadka ku saabsan badeecada iyo adeegyada BestBuy iyo Walmart. Waxaa intaa dheer, waxa ay isbarbardhigtaa sicirka iyo alaabadooda kala duwan. Dhuxulada wax soo saarka ayaa kuu heli doonta macluumaad isku mid ah. Qalabkani wuxuu kaa caawin doonaa helitaanka aragtiyaha waxqabadka leh waxaana lagu siin doonaa xog aad u wanaagsan oo laga helo ganacsigaaga. Marka laga reebo taas, waxay ku siin doontaa macluumaad ku saabsan sida ay tartamayaashu u soo dhoofi karaan alaabtooda iyo nooca sicir-dhimista lagu bixiyo internetka.
Qashinka badeecada wuxuu soo saaraa macluumaad sax ah oo ku saabsan alaab-qeybiyeyaasha:
Websaydhada ganacsiga iyo meheradaha suuqyada waxay leeyihiin boqollaal bixiyeyaasha firfircoon. Iyadoo la adeegsanayo Gaadiidka, waxaad ka uruurin kartaa macluumaadka ku saabsan alaab-qeybiyeyaal badan iyo waxeey isbarbar dhigi karaan alaabtooda iyo qiimaha. Waxaad sidoo kale ka qaadi kartaa xogta laga soo bilaabo Amazon iyo eBay waxayna si sahlan u tarjun kartaa bogaga internetka. Horumarinta Webka iyo barnaamijyadeydu waxay abuuri karaan nuqulo laqabatimay oo leh shey badeecad iyo waxay si fudud u qaban karaan hawlo badan Source .